ကူးစက်ရောဂါကပ်ကြောင့် စီးပွားရေးအကျပ်အတည်းများကြားမှ ကမ္ဘာ့စစ်အသုံးစရိတ်မှာ ဆယ်စုနှစ်များအတွင်း အမြင့်ဆုံးအဆင့်သို့ရောက်ရှိ။ အမေရိကန်မှာ တစ်ကမ္ဘာလုံး ကာကွယ်ရေးဘတ်ဂျက်၏ ၃၉% ကို သုံးစွဲနေ။ ကမ္ဘာ့ ဂျီဒီပီ ၄.၄% ကျဆင်းချိန်၌ စစ်အသုံးစရိတ် ၂.၆% တိုးလာ – H2Oupdatenews
ကူးစက်ရောဂါကပ်ကြောင့် စီးပွားရေးအကျပ်အတည်းများကြားမှ ကမ္ဘာ့စစ်အသုံးစရိတ်မှာ ဆယ်စုနှစ်များအတွင်း အမြင့်ဆုံးအဆင့်သို့ရောက်ရှိ။ အမေရိကန်မှာ တစ်ကမ္ဘာလုံး ကာကွယ်ရေးဘတ်ဂျက်၏ ၃၉% ကို သုံးစွဲနေ။ ကမ္ဘာ့ ဂျီဒီပီ ၄.၄% ကျဆင်းချိန်၌ စစ်အသုံးစရိတ် ၂.၆% တိုးလာ
oungmarine11@outlook.com 28/04/2021	No Comments
ကူးစက်ရောဂါကပ်ကျရောက်နေစဉ်ကာလအတွင်း စီးပွားရေးအကျပ်အတည်း ပြဿနာဆိုက်လျှက်ရှိသော်လည်း ကမ္ဘာတဝှမ်းရှိ အစိုးရအသီးသီးတို့က ၎င်းတို့၏ ကာကွယ်ရေးအသုံးစရိတ်များကို မြှင့်တင်လျှက်ရှိရာ ၁၉၈၈ ခုနှစ်မှစ၍ မမြင်တွေ့ရဖူးသော ပမာဏတစ်ခုသို့ ရောက်ရှိလာခဲ့ကြောင်း၊ အဆိုပါအပြောင်းအလဲတွင် အမေရိကန်မှာ ရှေ့ဆုံးမှ ဆက်လက်ဦးဆောင်နေကြောင်း လေ့လာမှုတစ်ခုအရ သိရှိရသည်ဟု Russia Today( Apr. 26,2021) ကရေးသားသည်။
၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်တွင် ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ရောဂါကြောင့် လော့ဒေါင်း Lockdown တားဆီးပိတ်ဆို့မှုများ ပြဋ္ဌာန်းခဲ့ရသည့်အတွက် ပျက်ပြားခဲ့ရသော စီးပွားရေးကို ပြန်လည်ထူမတ်ရန် နိုင်ငံတကာအစိုးရတို့အနေဖြင့် ခက်ခဲစွာ ရုန်းကန်နေရဆဲဖြစ်သည်။ သို့ရာတွင် ၎င်းတို့၏ စစ်အသုံးစရိတ်ကိုမူကား ဆယ်စုနှစ် ၃-ခု ကျော်ကာလ မတိုင်မီထက် ပိုမိုသုံးစွဲရန် တုန့်ဆိုင်းနေခြင်းမရှိကြကြောင်း ဆွီဒင်နိုင်ငံ စတော့ဟုမ်း အခြေစိုက် #နိုင်ငံတကာ_ငြိမ်းချမ်းရေး_သုတေသန_အင်စတီကျု့ဒ် (#SIPRI) ၏ ယခုနောက်ဆုံး အစီရင်ခံစာတွင်ဖော်ပြထားသည်။
#ကမ္ဘာ့စစ်အသုံးစရိတ် စုစုပေါင်းသည် ယခင်နှစ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင် ၂.၆ ရာခိုင်နှုန်းမြင့်တက်ခဲ့ပြီး ၁.၉၈၁ ထရီလီယံသို့ရောက်ရှိခဲ့ရာ ၁၉၈၈ ခုနှစ်နောက်ပိုင်း အမြင့်ဆုံးပမာဏဖြစ်ကြောင်း၊ ပြီးခဲ့သည့် ဆယ်စုနှစ်အတွင်း ကမ္ဘာ့စစ်အသုံးစရိတ်မှာ ၁၀ ရာခိုင်နှုန်းနီးပါး တိုးမြင့်လာခဲ့သည်ဟု SIPRI က တနင်္လာနေ့၌ အစီရင်ခံ တင်ပြထားသည်ဆို၏။
ကမ္ဘာ့စီးပွားရေး စုစုပေါင်း ပြည်တွင်းထုတ်ကုန် (ဂျီဒီပီ) သည် ၄.၄ ရာခိုင်နှုန်းကျဆင်းသွားသည့် နှစ်တစ်နှစ်အတွင်း၌ ယခုကဲ့သို့ တိုးမြင့်လာခြင်းဖြစ်ကြောင်း၊ ၂၀၀၉ ခုနှစ် စီးပွားရေးနှင့် ဘဏ္ဍာရေးအကျပ်အတည်း နောက်ပိုင်း စစ်အသုံးစားရိတ် ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးမှာ တစ်နှစ်ပြီး တစ်နှစ် မြင့်မားလာကြောင်း၊ ၂၀၂၀-ခုနှစ် ကူးစက်ကပ်ရောဂါသည် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာစစ်အသုံးစရိတ်အပေါ် သိသာစွာ အကျိုးသက်ရောက်မှု မရှိကြောင်း၊ တောင်ကိုရီးယားနှင့် ချီလီကဲ့သို့ နိုင်ငံအချို့တွင် ကူးစက်ကပ်ရောဂါတုန့်ပြန်ရေး၌ ပိုမိုသုံးစွဲပြီး ရုရှား-ဘရာဇီးတို့၏ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် စစ်ရေးဘတ်ဂျက်ထက် သိသာစွာ လျော့နည်းသည်ကို တွေ့ရကြောင်း၊
အမေရိကန်သည် နိုင်ငံတကာတွင် ကာကွယ်ရေးအသုံးစရိတ်၌ အကြီးမားဆုံးနိုင်ငံစာရင်းတွင် ဦးဆောင်နေဆဲဖြစ်ပြီး တစ်ကမ္ဘာလုံးကာကွယ်ရေးဘတ်ဂျက်၏ ၃၉ ရာခိုင်နှုန်းကို သုံးစွဲလျှက်ရှိကြောင်း ကာကွယ်ရေးဘတ်ဂျက်အများဆုံး ထိပ်တန်း ၁၀-နိုင်ငံစာရင်းပါ ဂျာမနီနှင့် တောင်ကိုးရီးယားတို့ထက်ပင် အဆပေါင်းများစွာပိုမိုနေကြောင်း၊
မကြာသေးမီက အမေရိကန်၏ စစ်အသုံးစရိတ်တိုးမြှင့်မှုမှာ အဓိကအားဖြင့် သုတေသနနှင့် အသစ်တီထွင် တည်ဆောက်မှုတို့တွင် အကြီးအကျယ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းဖြစ်ကြောင်း၊ နျူကလီးယားလက်နက်ခေတ်မီရေးနှင့် အကြီးစားလက်နက်ဖြည့်တင်းရေးကဲ့သို့ ရေရှည်စီမံကိန်းကြီးများ၌ ဖြစ်ကြောင်း၊ ထိုအချက်မှာ မဟာဗျူဟာပြိုင်ဘက် ရုရှား-တရုတ်တို့၏ ခြိမ်းခြောက်မှုတွင် အမေရိကန်တပ်မတော်မှာ ချိနဲ့လျှက်ရှိသည်ဟု ရှုမြင်ပြီး အင်အားဖြည့်တင်းရန် ဒေါ်နယ်ထရမ့် အစိုးရ၏ စိုးရွံ့မှု ကြီးထွားခဲ့သည်ကို ထင်ဟပ်လျှက်ရှိကြောင်း SIPRI ၏ လက်နက်နှင့် စစ်ရေးတည်ဆောက်မှုဆိုင်ရာ သုတေသီတစ်ဦးဖြစ်သူ အလက်ဇန္ဒြာမာ့ခ်စတိန်းက ပြောကြား သည်။
အမေရိကန်၏ အနီးကပ်ဆုံးပြိုင်ဘက်ဖြစ်သော တရုတ်သည် ကာကွယ်ရေးအတွက် ၃-ဆမျှ လျော့နည်းသုံးစွဲခဲ့သည်၊ ၂၀၂၀-ခုနှစ်တွင် တစ်ကမ္ဘာလုံး စစ်အသုံးစရိတ်၏ ၁၃ ရာခိုင်နှုန်းမျှကို သုံးစွဲခဲ့ပြီးဖြစ်၍ စစ်ဖက်ဝန်ထုပ် ဝန်ပိုးများအတွက် တရုတ်တွင် ကာကွယ်ရေးအသုံးစရိတ်ကို မြှင့်တင်ရန် မလိုအပ်တော့ချေ။
အိန္ဒိယ၊ ရုရှားနှင့် ဗြိတိန်တို့သည် စစ်အသုံးစရိတ်အများဆုံး ၅ နိုင်ငံစာရင်းတွင် ပါဝင်သည်။ ၎င်းတို့၏ ကာကွယ်ရေးအသုံးစရိတ်များသည် အမေရိကန် မဆိုထားဘိ တရုတ်ထက်ပင် များစွာနည်းပါးသည်။ ကာကွယ်ရေးဘတ်ဂျက် အများဆုံး ၁၀ နိုင်ငံတွင် ဆော်ဒီအာရေဗီးယားသည် ၂၀၂၀-ခုနှစ်တွင် စစ်အသုံးစရိတ် လျော့နည်းသွားသည့် တစ်ခုတည်းသော နိုင်ငံဖြစ်သည်။
စီးပွားရေးကျဆင်းမှုနှင့် ယှဉ်တွဲလျှက် စစ်အသုံးစရိတ် ဆက်လက်တိုးမြှင့်နေစဉ် နေတိုးမဟာမိတ်များတွင် အဖွဲ့ဝင် ၁၂ နိုင်ငံတို့သည် ၎င်းတို့၏ ဂျီဒီပီ ၂ % သို့မဟုတ် ထိုထက်ပို၍ ကာကွယ်ရေးအတွက် သုံးစွဲလျှက်ရှိသည်။ ၉-နိုင်ငံသာလျှင် ၂၀၁၉-ခုနှစ်အတိုင်း ရှိနေခဲ့သည်။ အထူးသဖြင့် ပြင်သစ်၏ ၂% ထက်ကျော်၍ သုံးစွဲခြင်းမှာ ၂၀၀၉-ခုနှစ် နောက်ပိုင်း ပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်သည်။
ထိုသို့ ကာကွယ်ရေးဘတ်ဂျက်တိုးမြှင့်ခြင်းဖြင့် နေတိုးမဟာမိတ်အဖွဲ့၏ စွမ်းဆောင်ရည်ကို မြှင့်တင်ပေးနိုင်ခြင်း ရှိ-မရှိဆိုသည်မှာလည်း နောက်ထပ်ပြဿနာ တစ်ခုဖြစ်နေသည်။ စွမ်းဆောင်ရည် တည်ဆောက်ရေးဆိုသည်မှာ စစ်အသုံးစရိတ်ကို မဟာမိတ်အဖွဲ့၏ ရည်မှန်းချက်တစ်ခုသို့ ရောက်ရှိအောင် ချင့်ချိန်ဆုံးဖြတ်ခြင်းထက် ကူးစက်ကပ်ရောဂါကြောင့် စီးပွားရေးကျဆင်းမှုနှင့် ပိုမိုသက်ဆိုင်ဖွယ်ရှိသည်။
(((Russia Today., 26 Apr, 2021,” Pandemic crisis, anyone? 2020’s global military spending reached ‘HIGHEST LEVEL’ in decades despite economic woes, report finds.” ကို #HtayOung, #OungMarine ဆီလျော်အောင်ကောက်နှုတ်ဘာသာပြန်ဆိုသည်။ )))
Previous Previous post: မြန်မာနှင့် နယ်မြေချင်းထိစပ်နေသော အိန္ဒိယ အာသံပြည်နယ်တွင် အင်အားပြင်း ငလျင်လှုပ်။
Next Next post: တရုတ်နိုင်ငံ၏ လူဦးရေ နှစ်-၅၀ အတွင်း ပထမဆုံးအကြိမ် ကျဆင်းကြောင်း တွေ့ရှိ။ မြို့ပြနေစုံတွဲများနှင့် ၁၉၉၀ နောက်ပိုင်းမွေးဖွားလာသူများသည် လွတ်လပ်မှုနှင့် အသက်မွေးအလုပ်အကိုင်ကို အလေးထားခြင်း မြို့ကြီးများ၏ လူနေမှုစရိတ် ကြီးမြင့်ခြင်းမှာ လူဦးရေတိုးနှုန်းကို ဟန့်တားနေ၊ ဂျီဒီပီကျဆင်းမည်